ထိသွားလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ထိသွားလို့	8
Posted by Thint Aye Yeik on Jun 6, 2015 in Arts & Humanities, Critic, History, My Dear Diary, Poetry, Short Story | 8 comments
.ဝိညာဉ်ကို ကော်နဲ့ ကပ်ပြီး
.လူဖြစ်အောင်… ငါ အသက်သွင်းဖူးတယ်။
.လက်သည်းနဲ့ ပွင့်ထွက်အောင် တောက်
.စီးကရက် သောက်ရင်း… သူ ချောင်းဆိုးဖူးတယ်။
.“ကြယ်ကို ကြယ်နဲ့ ရံမတဲ့”
.အားလုံးကို သူ …အပိုင်ရတယ်…။
.ပျော်လိုက်ရတာ … ။
.သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ဆီ… ဆက်ပေးပါ…။
.ပဆစ်အိမ် ဝင်္ကပါပျက်၊ နက္ခတ်ပျံရာည…
.ငါ… သူ့ကို “သတိရကြောင်း” ပြောပြပေးပါ… ။
(ကြယ်သီချင်းနှင့် လမင်းသံစဉ် ၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် လုံးချင်းဝတ္ထုထဲမှ…)
မနေ့ညက… အဲဒီ စာအုပ်လေး ပြန် ဖတ်မိရင်းက…
အဲဒီ စာသားနေရာ အရောက်မှာ…
အလင်းဆက် @ မောင်သူရ
အောင် မိုးသူ says: တာရာမင်းဝေ ကတော့ ကဗျာခံစားတတ်သူတွေရဲ့ ဟီးရိုးပဲလေ။
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်ပါ့ဗျားးးး
Mike says: .နိခေါင်းစဉ်မြင်တော့ ဟိုကော်ဖီမစ်ကြော်ငြာသတိရသွားတယ်ကွ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: စူပါ လီမွန်တီး ကြော်ငြာလား ဦးကြီး..
အဟိ.. အဲ့ကြော်ငြာက …. ပေါတောတောနဲ့နော်..
ကားနောက်ဆုတ်တာကို ကြည့်ပေးတာကလည်း မထိသေးဘူး…မထိသေးဘူး..နဲ့ အော်တာလေ..
တကယ့်တကယ် ကားနောက်ဆုတ်ရင်… အဲ့လို ဘယ်သူမှ မအော်တာကို ဇွတ် လုပ်ယူထားတဲ့ ကြော်ငြာကြီး
မြစပဲရိုး says: . မှော်ဆရာ က စုံးမ တွေ ရဲ့ ဖန်ဆင်းမှု ကို အဟုတ်မှတ်သွားရှာတာကွဲ့။ lol:-))
Alinsett @ Maung Thura says: .မှော်ဆရာနဲ့ စုန်းမတွေ ပညာပြိုင်ရင်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တကယ်ပြောရရင် ကဗျာမှာ ရစ်သမ်က အရမ်းစကားပြောတယ်။ မော်ဒန်ဖြစ်ဖြစ် မမော်ဒန် ဖြစ်ဖြစ်၊ တကယ်တမ်းကျတော့ ရစ်သမ်တွေ အရေးပါတယ်။ တာရာမင်းဝေ ရဲ့ အဲကဗျာက ကိုသူရ ရဲ့ – ညစာစားနေတဲ့ညတွေ- ကဗျာကို မမီဘူး။ ကဗျာနှစ်ခု နည်းနည်းဆင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရစ်သမ်မှာ ညစာစားနေတဲ့ညတွေကို မမီဘူး
Alinsett @ Maung Thura says: ညစာ စားနေတဲ့ ညတွေ… ငါနဲ့ အတူ က ခုန်ဖို့ 
အဖြူစစ်စစ် ညစာ စားပွဲအတွက်..
ကွဲနေတဲ့ငါ့အသည်းကို…တစ်ဝက်တိတိ ချက်ပြုတ်ထားတယ်။
နှင်းဆီတွေရဲ့ ရိုးသားတဲ့ ရနံ့ကိုလည်း…
ထိုင်ခုံတွေပေါ် ကြိုတင် ဆွတ်ဖျန်းလို့ …….။
ပြီးရင်တော့ ၁ ၂ ၃ လို့ ငါအော်လိုက်တာနဲ့ …
မင်းတို့အားလုံး ကကြပေ့ါ…။
“ငါ တစ်ခု လုံး” ပျောက်နေတဲ့ငါ့အတွက် ကကြ။
၀မ်းနည်းနာကျင်စွာ အော်ဟစ် မြည်တမ်း လိုက်သမျှ..
ပျော်စရာ ဂီတ သံစဉ်တစ်ခု လို့ သတ်မှတ်ပြီး…
က ……က …ကကြပါတော့ …..ကွယ်……….
….. . …. … .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .။
23.12.2010 ညနေ 4း00